लमजुङको राइनासमा खाद्य ब्याङ्क - Gandaki Sandesh
भाद्र २१, लमजुङ
लमजुङ लमजुङको राइनास नगरपालिका वडा नं. ७ को गरमबेसीमा फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लक डाउन का कारण काममा जान नपाएका कारण समस्यामा परेका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी चेपे मर्स्याङ्दी युवा क्लबले फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याएको हो । फुड बैंंकबाट हालसम्म दुई चरणमा गरि गाउँका ६५ जनालाई निःशुल्क खाद्य सामाग्री तथा सरसफाइका सामाग्री वितरण गरिएको क्लबका अध्यक्ष मन बहादुर तामाङले गण्डकी सन्देशलाई बताउनु भयो। पहिलो चरणमा ५२ अति विपन्न घर धुरी लाइ राहत प्याकेज वितरण गरिएको थियो । अहिले नियमित रुपमा फुड बैंक सन्चालनमा छ, जसबाट १३ घर परिवारले खाध तथा स्वास्थ्य सामाग्री ग्रहण गरेका छ्न । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविको पार्जन गर्नेहरुकाका लागि यसले राहत पुगेको थियो । यस कार्यमा सहयोग गर्नेहरु प्रति हार्दिक धन्यबाद दिँदै अगामी दिनमा पनि यस प्रकारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने क्लवका सक्रिय सदस्य सुरज गिरीले बताउनु भयो । अहिले संचालित फुड बैंक बाट प्रतिपरिवार पाँच किलो चामल, एक किलो आलु, एक किलो दाल, नुन, तेल, प्याज, साबुन, मन्जन र मास्क सहितको प्याकेज बनाएर वितरण गरिदै आइरहेको छ । लकडाउन अवधिभर वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा पालैपालो फुड बैंक सञ्चालन गरी विपन्न वर्गलाई सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । चेपे मर्स्याङ्दी युवा क्लबले लकडाउनको सुरुवाती दिनदेखि नै कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सरसफाइका कार्यक्रम तथा बृक्षरोपणको कार्यक्रम गर्दै आएको छ । लमजुङको राइनास नगरपालिका वडा नं. ७ को गरमबेसीमा फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लक डाउन का कारण काममा जान नपाएका कारण समस्यामा परेका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी चेपे मर्स्याङ्दी युवा क्लबले फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याएको हो । फुड बैंंकबाट हालसम्म दुई चरणमा गरि गाउँका ६५ जनालाई निःशुल्क खाद्य सामाग्री तथा सरसफाइका सामाग्री वितरण गरिएको क्लबका अध्यक्ष मन बहादुर तामाङले गण्डकी सन्देशलाई बताउनु भयो। पहिलो चरणमा ५२ अति विपन्न घर धुरी लाइ राहत प्याकेज वितरण गरिएको थियो ।
अहिले नियमित रुपमा फुड बैंक सन्चालनमा छ, जसबाट १३ घर परिवारले खाध तथा स्वास्थ्य सामाग्री ग्रहण गरेका छ्न । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविको पार्जन गर्नेहरुकाका लागि यसले राहत पुगेको थियो । यस कार्यमा सहयोग गर्नेहरु प्रति हार्दिक धन्यबाद दिँदै अगामी दिनमा पनि यस प्रकारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने क्लवका सक्रिय सदस्य सुरज गिरीले बताउनु भयो । अहिले संचालित फुड बैंक बाट प्रतिपरिवार पाँच किलो चामल, एक किलो आलु, एक किलो दाल, नुन, तेल, प्याज, साबुन, मन्जन र मास्क सहितको प्याकेज बनाएर वितरण गरिदै आइरहेको छ । लकडाउन अवधिभर वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा पालैपालो फुड बैंक सञ्चालन गरी विपन्न वर्गलाई सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । चेपे मर्स्याङ्दी युवा क्लबले लकडाउनको सुरुवाती दिनदेखि नै कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सरसफाइका कार्यक्रम तथा बृक्षरोपणको कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।